Malunga nathi -Shijiazhuang Sothink Trading Co., Ltd.
I-Shijiazhuang Sothink Trading Co., Ltd., eyasekwa ngo-2011, yinkampani ekhethekileyo egubungela ummandla weemveliso zengca ezingezizo. Iimveliso zethu eziphambili yingca eyenziweyo yokuLungiswa kweNdawo kunye nebhola / ibhola ekhatywayo. sikwabonelela ngezinye iimveliso ngokubhekisele kwezi ndawo zikhankanywe apha ngasentla, ezinje ngetheyiphu edibeneyo, ibhodi yamanqaku e-LED, igrabile yerabha, njl.
Njengenkampani yokuthumela kwelinye ilizwe, sijongana nezixhobo ezahlukeneyo zezinto zokwakha kunye nezinto zokwakha, ezifana nemibhobho ejikelezileyo kunye neetyhubhu ezikwisikwere, iphepha lealuminium, i-PPGI / iikhoyili zentsimbi, umnatha wocingo, iinzipho, izikrufu, ucingo lwesinyithi, njl.
Namhlanje, zonke iimveliso zethu zithunyelwa kwihlabathi liphela, ezinje nge North America, South America, Europe, Southeast Asia, Middle East, nase Afrika.
Injongo yethu kukubonelela abathengi bethu ngemveliso esemgangathweni ophezulu kunye nenkonzo yethu elungileyo kwaye ekhawulezayo. Simisele inkqubo yethu ethembekileyo negqibeleleyo ye-QC, ebandakanya ukuthengwa kwemveliso eluhlaza, imveliso, ukuhlolwa kunye nokuhanjiswa kwephakheji.
Ukuba unomdla kwiimveliso zethu, nceda unxibelelane nathi ngolwazi lwexesha elizayo. Umbuzo wakho uya kuthakazelelwa kakhulu sithi .Siyakuqinisekisa ngempendulo ekhawulezileyo kunye namaxabiso okhuphiswano.
Umbuzo: Uhlawula njani?
Xelela ubungakanani ngqo kunye nobungakanani odolo.Senza iikowuteshini kuwe.
2.Ukuba yonke into ilungile, sikwenzela iPI. Ke nceda uhlawule i-30% yemali iyonke kwiakhawunti yethu.
(Samkela i-T / T, i-Western Union, i-L / C, njl.
3. Emva kokuba sifumene i-30% yentlawulo, siya kukuvelisela iimpahla.
4.Ukuba sigqibe iimveliso, siya kukuthumela iifoto ukuze ujonge kwaye uqinisekise.
5.Ukuba yonke into ilungile, siya kuthumela imithwalo sikunike ikopi ye-B / L.
6. Emva kokuba sifumene isixa semali eseleyo, siya kukuthumela i-B / L kuwe, unokuyithatha imithwalo yakho.
Umbuzo: Ndihlawula imali kuwe, ngaba ikhuselekile?
Singabantu inkampani yorhwebo lwangaphandle yobungcali. Sithatha inxaxheba Canton Fair minyaka le. Udumo bubomi bethu. Intlawulo yakho ikhuselekile kwi-100%.
Q: Yintoni i-DTEX?
A: Ubunzima bamalaphu kwishumi ngalinye leemitha eziliwaka
Umbuzo: Ngaba ingca eyenziweyo inobomi obulinganiselweyo?
A: Inobomi obude obuhlala iminyaka eyi-8-10. Ingca eyenziweyo yimveliso eyenziweyo evezwe ngaphandle. Ngomsebenzi ochasene ne-UV ingca iqinisekisa abasebenzisi ukuya kuthi ga kwi-8 ukuya kwi-10 iminyaka yobomi. Ukuphuhliswa kokuveliswa kwemicu yengca eyenziweyo kuthabatha amanyathelo amakhulu ukuya phambili, ke oko kunikezela ngokuchasene ngakumbi nokunxiba kunye nokuthambisa kwemisonto. Ke kubalulekile ukuba ukhethe ingca eyenziweyo ekumgangatho ophezulu xa uthenga.
Umbuzo: Ngaba amanzi aphuma phakathi kwengca eyenziweyo?
A: Ewe. Ngapha koko, ingca iyile ngokukodwa imingxunya yokuhambisa amanzi ibekwe ngokungaguquguqukiyo kuyo yonke iitrf ukuqinisekisa ishedi yamanzi ngokukhawuleza nangokufanelekileyo kwaye ayidibi ngaphezulu.